स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने कानुन किन ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
हाम्रो विधायिका स्वार्थी समूहको अखडाजस्तो भएको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सांसद संसद्को श्रम समितिको सदस्य, स्कुल सञ्चालक सांसद शिक्षा समितिमा, बैंक सञ्चालक अर्थ समितिमा सदस्य हुने चलन २०६५ पछाडि संसदीय अभ्यासको परम्पराका रूपमा स्थापित भएको छ ।
माघ १३, २०७८ किरण चापागाईं
सत्रौं शताब्दीसम्म पनि सार्वजनिक पदमा हुनेले निजी स्वार्थका लागि आफ्नो कार्यालय र पदको दुरुपयोग गर्नु स्वाभाविक मानिन्थ्यो । तर जब विश्वमा प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको विस्तार सुरु भयो, तब सार्वजनिक पदमा हुनेले सार्वजनिक हितविपरीत निजी स्वार्थका लागि काम गर्नुलाई अस्वाभाविक मान्न थालियो ।
यस प्रकार प्रजातन्त्रको अठारौं शताब्दीमा आधुनिक युग सुरु भएसँगै सार्वजनिक निकायमा हुने व्यक्तिलाई निजी स्वार्थको प्रभावमा अनुचित निर्णय लिन रोक्नुपर्छ भन्ने मान्यता सुरु भयो । यही मान्यतालाई नै आज आएर स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापनको अवधारणा भनेर बुझिन्छ ।
स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापनको अवधारणा विगत दुई दशकदेखि भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय अभियानको केन्द्रमा छ । तर हाम्रोमा स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापनको विषय उपेक्षित रहँदै आएको छ । हाम्रोमा सार्वजनिक पदमा हुनेहरूले सार्वजनिक हितलाई बेवास्ता गर्दै निजी स्वार्थ पूरा गर्न आफ्नो कार्यालय र पदको दुरुपयोग गर्नु सामान्य भइसकेको छ । बतास प्रकरण यसैको उपज हो । सार्वजनिक पदमा हुने व्यक्तिहरू स्वार्थको द्वन्द्वमा संलग्न भएका घटनाहरू सञ्चारमाध्यमहरूले दैनिकजसो नै बाहिर ल्याइरहेका छन् । बाहिर नआएका स्वार्थका द्वन्द्वहरू कति होलान् ! सार्वजनिक जानकारीमा आएका मामिला मात्रैलाई आधार मान्ने हो भने पनि स्वार्थको द्वन्द्वको महामारीबाट देश आक्रान्त बनेको छ ।
राज्यका सबै अंग स्वार्थको द्वन्द्वबाट अछुता छैनन् । देशको कार्यकारिणीदेखि न्यायपालिका र विधायिकादेखि वडासम्म पनि स्वार्थको द्वन्द्वको महामारी फैलिएको छ । न्यायपालिकाका प्रमुख नै स्वार्थको द्वन्द्वमा चुर्लुम्म डुब्दा न्यायपालिका इतिहासकै गम्भीर मोडमा पुगेको छ । कार्यकारिणीको एक सदस्यले स्वार्थको द्वन्द्वमा संलग्न हुँदै आफ्नै बुहारीलाई समाज कल्याण परिषद्को उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको तीतो यथार्थ हामीसामु छ । वैदेशिक रोजगारी बोर्डमा विज्ञका रूपमा म्यानपावर व्यवसायीलाई नियुक्त गरिएको छ । कुनै खास व्यापारिक समूहको स्वार्थपूर्ति गर्न वार्षिक बजेटमा नीतिगत व्यवस्था गर्नु कार्यकारिणीका लागि सामान्य भएको छ ।
हाम्रो विधायिका स्वार्थी समूहको अखडाजस्तो भएको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सांसद संसद्को श्रम समितिको सदस्य, उद्योगपति सांसद वाणिज्य समितिमा, स्कुल सञ्चालक सांसद शिक्षा समितिमा, निर्माण कम्पनी सञ्चालक सांसद विकास र सार्वजनिक लेखा समितिमा, बैंक सञ्चालक अर्थ समितिमा सदस्य हुने चलन २०६५ सालपछाडि संसदीय अभ्यासको परम्पराका रूपमा स्थापित भएको छ ।
ठेकदार सांसदहरूले विकास समितिमा बसेर आफ्नै निर्माण कम्पनीले पाएका ठेक्कापट्टाबारे छलफल गर्दा पनि हाम्रो संसद्ले थाहा पाउँदैन । अझ त्यस्ता सांसदहरूले आफ्नो स्वार्थ घोषणा नै गर्नु पर्दैन । सम्झौतायुक्त कानुनहरू (सहकारी ऐन, शिक्षा ऐन आदि) बनाउनु र सांसदहरूले आफ्नो तलब र सुविधा आफैं निर्धारण गर्नु हाम्रो विधायिकाको चरित्र बनिसकेको छ । स्थानीय तहमा झनै बेथिति छ । अख्तियारका एक पूर्वसदस्य अनुसार, पालिकाप्रमुख र वडाध्यक्षका डोजर र ट्र्याक्टरहरूले मात्र स्थानीय तहमा काम पाउने तीतो यथार्थ हामीसामु छ । तर कारबाही गर्ने अवस्था छैन । किनकि कागजमा सबै कुरा दुरुस्त छ । उपभोक्ता समितिका प्रमुखहरू आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने गरी विकास–निर्माण कार्यमा निस्फिक्री रूपमा संलग्न हुनु हाम्रा लागि सामान्य भएको छ ।
स्वार्थको द्वन्द्वको महामारी सिंहदरबार, रामशाह पथ, नयाँ बानेश्वर हुँदै दूरदराजका वडाहरूसम्म फैलिइसकेको छ । अर्को शब्दमा, स्वार्थको द्वन्द्वको सामाजिकीकरण भएको छ । तर यो पीडादायी यथार्थले हाम्रा सरकार, नीतिनिर्माता र राजनीतिक दलहरूलाई अहिलेसम्म पनि छुन सकेको छैन । त्यसैले स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापनको विषय अहिले पनि नीतिनिर्माणको तहमा प्राथमिकता बन्न सकेको छैन । यस अर्थमा स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापनका दृष्टिले हामी सत्रौं शताब्दीमै छौं । आखिर स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्नु नै किन पर्छ त ?
स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन किन ?
नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले सुशासनको परिकल्पना गरेको छ । संविधानले अंगीकार गरेको राजनीति तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीतिले ‘स्वच्छ,’ ‘निष्पक्ष,’ ‘पारदर्शी’ र ‘भ्रष्टाचारमुक्त’ सार्वजनिक प्रशासनको परिकल्पना गरेको छ । तर स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन नहुँदा संविधानले परिकल्पना गरेका यी लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न असम्भव देखिएको छ ।
यो कुरा नयाँ संविधान लागू भएपछिका ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका करप्सन इन्डेक्सहरूले पुष्टि गर्छन् । उक्त इन्डेक्समा हाम्रो अंक ३५ भन्दा तल छ, जसको अर्थ हो— हामी अति भ्रष्ट देशको सूचीमा छौं । देशको सुशासनको यो खराब तस्बिर सुधार्न स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन एक प्रभावकारी कदम हुन सक्छ । किनकि स्वार्थको द्वन्द्व भ्रष्टाचारको केन्द्रमा हुन्छ र यसको व्यवस्थापन भ्रष्टाचारविरुद्धको एउटा आधारभूत अवधारणा हो । त्यही भएरै संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २००४ देखि नै आफ्नो भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धिमा स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापनलाई समेटेको छ । एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंकजस्ता संस्थाहरूले पनि विभिन्न देशमा स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रयासहरूलाई प्रवर्द्धन गर्दै आइरहेका छन् ।
स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन हाम्रो लोकतन्त्रको भविष्यसँग जोडिएको छ । किनकि स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापनको अवधारणा प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । त्यसैले त उन्नत प्रजातन्त्र भएका देशहरूले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरू स्वार्थको द्वन्द्वमा संलग्न भएर अनुचित निर्णय नलिऊन् र सार्वजनिक हितविरुद्ध आफ्नो कार्यालय र पदको दुरुपयोग नगरून् भनेर स्वार्थको द्वन्द्वको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गरेका छन् ।
ती देशहरूमा स्वार्थको द्वन्द्वलाई नैतिक प्रश्नका रूपमा मात्र नहेरी फौजदारी कसुरजन्य भ्रष्टाचारको रूपमा परिभाषित गरिएको छ । स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्न प्रभावकारी संस्थागत प्रणाली विकास गरी ती देशमा निरन्तर प्रयास गरिएको पाइन्छ । द्वन्द्वको व्यवस्थापन नगर्दा प्रजातान्त्रिक तथा राजनीतिक संस्थाहरूले निष्पक्ष, स्वतन्त्र र उत्तरदायी भएर सार्वजनिक हितमा काम गर्न सक्दैनन् जसले गर्दा यस्ता संस्थाप्रति जनविश्वास घट्छ । यो अवस्थामा यी संस्थाहरू निष्प्रभावी हुन पुग्छन् । फलतः प्रजातन्त्र सुदृढ हुन सक्दैन । यस अर्थमा स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापनको प्रत्यक्ष साइनो हाम्रो कमजोर लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरणसँग जोडिएको छ ।
स्वार्थको द्वन्द्वले नीति निर्माणमा नराम्रो असर पार्छ । व्यवस्थापन नगरिएको स्वार्थले गर्दा सम्झौतायुक्त कानुन र नीति बन्ने सम्भावना हुन्छ । हाम्रो देशको अनुभवले यही भन्छ । संसद्मा स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन नगर्दा बैंक तथा वित्तीय व्यवस्था सम्बन्धी ऐन, शिक्षा ऐन, सहकारी ऐनजस्ता सम्झौतायुक्त कानुन बन्न पुगेको तीतो अनुभव हामीसामु छ । यो प्रवृत्तिप्रति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७४ को वार्षिक प्रतिवेदनमै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । यस्ता सम्झौतायुक्त कानुन र नीतिमा जनविश्वास हुँदैन । जब नागरिकमा नीतिनिर्माताहरू कसैको स्वार्थमा परेर निर्णय लिन्छन् भन्ने पर्छ, तब हाम्रा सार्वजनिक संस्थाहरू र सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूप्रति विश्वास घट्छ । नागरिकले सार्वजनिक निकाय, प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूमा विश्वास नगर्ने अवस्था आउँदा राजनीतिक प्रणालीप्रति नै वितृष्णा पैदा हुने अवस्था आउँछ । यो अवस्थामा हाम्रो गणतान्त्रिक लोकतान्त्रिक व्यवस्था फस्टाउन सक्दैन ।
नेपालीको विकासप्रतिको तीव्र चाहना पूरा गर्न वैदेशिक लगानी आवश्यक छ । तर स्वार्थको द्वन्द्वको प्रभावकारी व्यवस्थापन नहुँदा नेपालले चाहे अनुरूप वैदेशिक लगानी नआउन सक्छ । किनकि वैदेशिक लगानीकर्ताले अन्य पक्षका अलावा स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन भए–नभएको पनि हेर्ने गरेको तथ्य विश्व बैंकको एउटा अध्ययनले देखाएको छ । सन् २०१२ को उक्त अध्ययनले स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन मूलतः उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति र इन्ट्रेस्ट सार्वजनिक नगर्ने देशहरूमा वैदेशिक लगानी कम आउने देखाएको छ । यसको अर्थ वैदेशिक लगानी वृद्धि गर्न पनि स्वार्थको प्रभावकारी व्यवस्थापन अपरिहार्य हुन्छ ।
स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्नु नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पनि हो । नेपाल सन् २०११ देखि राष्ट्रसंघीय भ्रष्टाचारविरुद्ध महासन्धिको पक्षराष्ट्र छ । उक्त महासन्धिका धारा ७ र ८ ले सृजना गरेको दायित्य अन्तर्गत नेपालले सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व छ । तर यी दायित्वहरू पूरा गर्ने दिशामा प्रगति निकै निराशाजनक छ । यो महासन्धि कार्यान्वयन गर्न २०६९ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले एउटा राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना त पास गर्‍यो तर कार्यान्वयनको अवस्था भने निकै खराब छ । उक्त रणनीतिले स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन सम्बन्धी एकीकृत कानुन बनाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर यो जिम्मेवारी तोकिएको मुख्य निकाय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दस वर्षसम्म पनि केही गरेको छैन ।
स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापनको चुनौती
स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्ने सवालमा अहिले दुईवटा मुख्य चुनौती देखिन्छन् । पहिलो, राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी । दोस्रो, स्वार्थको द्वन्द्वप्रति राष्ट्रिय दृष्टिकोण । स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन प्रभावकारी रूपमा हुनु भनेको शक्तिमा भएकाहरूका पद र कार्यालयको निजी स्वार्थको दुरुपयोग रोक्नु हो ।
के हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वहरू आफैंलाई अंकुश लगाउन तयार छन् त ? पक्कै पनि छैनन् । भएका भए २०६९ सालको कानुन बनाउने सरकारको निर्णय, सरकारी थिंक ट्यांक नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको लिखित सिफारिस र अख्तियारको सुझाव प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बेवारिसे बन्ने थिएन । त्यसै गरी, हाम्रा राजनीतिक पार्टी र सरकारहरूमा व्यवसायी, व्यापारी, उद्योगी, ठेकदार, म्यानपावर व्यवसायी र बिचौलियाहरूको प्रभाव बढ्दै गएको छ । केन्द्रदेखि वडासम्म नै राजनीतिक पार्टीहरूलाई प्रभावित पारी आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न लिप्त भएको यो वर्ग सरकार र राजनीतिक नेतृत्वलाई केन्द्रदेखि वडासम्म प्रभाव पार्ने अवस्थामा छ । यो वर्गले स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्ने कानुन बनाउन नदिने सम्भावना प्रबल छ ।
यस अर्थमा प्रबल राजनीतिक इच्छाशक्तिबिना यस्तो कानुन बनाउन सम्भव देखिँदैन । हुन त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले डा. गोविन्द केसीसँग भदौ १ र पुस १४ मा उक्त कानुन बनाउने प्रतिबद्धता गरेका छन् । कार्यान्वयन गर्ने गरी उक्त प्रतिबद्धता गरिएको हो भने त्यो स्वागतयोग्य छ । तर व्यापारी, उद्योगी, ठेकदार र निर्माण व्यवसायीबाट घेरिएका प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुनेमा कमै आशा गर्न सकिन्छ । डा. केसी अर्को अनशन नबसी उक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नहुन सक्छ ।
स्वार्थको द्वन्द्वलाई कसरी हेर्ने र यसलाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्नेमा हामीमा समस्या छ । मौजुदा क्षेत्रगत कानुनमा कार्यकारिणी, न्यायपालिका र विधायिकामा हुने स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन सम्बन्धी केही प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ । जस्तो कि, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताको दफा २७१, न्याय परिषद् ऐनको दफा २९ र ३३ मा न्यायाधीशहरूको स्वार्थ व्यवस्थापन गर्न खोजिएको छ । त्यस्तै सुशासन (व्यवस्थापन र सञ्चालन) ऐनको दफा १८ ले कार्यकारी अंगमा हुने स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्न खोजेको छ । त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा नियमावली र राष्ट्रिय सभा नियमावलीमा विधायिकामा हुने स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्न प्रयास गरिएको छ । तर यी सबै कानुनी प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मापदण्डको कसीमा राख्दा एकदमै प्रारम्भिक (बेसिक) छन् । स्वार्थको द्वन्द्वसँग सम्बन्धित विविध आयामलाई यी कानुनी प्रावधानले समेटेका छैनन् । जस्तो, स्वार्थको द्वन्द्वको परिभाषा नै छैन ।
स्पष्ट रूपमा परिभाषा नगरी स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन हुनै सक्दैन । किनकि स्वार्थको द्वन्द्व आफैंमा व्यापक र जटिल अवधारणा हो । त्यस्तै, सम्भावित र भविष्यमा हुने स्वार्थको द्वन्द्वबारे पनि मौजुदा कानुनी प्रावधानहरू मौन छन् । प्रायोजित भ्रमण, खाना र अन्य सुविधा, सार्वजनिक अभिनन्दन, मानार्थ डिग्री, छात्रवृत्ति, सम्मान, गोप्य सूचनाजस्ता स्वार्थको द्वन्द्वसँग सम्बन्धित विषयलाई समेटिएको छैन । त्यस्तै, यी कानुनमा स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी दृष्टिकोणमा पनि समस्या छ । यी कानुनमा स्वार्थको द्वन्द्वलाई आचरणका रूपमा मात्र हेरिएको छ, जबकि स्वार्थको द्वन्द्वसँग आचरण र कानुनी प्रश्न दुवै जोडिएको हुन्छ । र, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार स्वार्थको द्वन्द्व भ्रष्टाचारजन्य फौजदारी कसुर हो ।
अन्त्यमा, स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन नीतिगत र कानुनी रूपमा गर्ने मामिलामा हामी प्रारम्भिक अवस्थामै छौं । मौजुदा क्षेत्रगत कानुनी प्रावधानबाट स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन सम्भव छैन । सुशासन अभिवृद्धि गरी लोकतन्त्र सुदृढ गर्न स्वार्थको व्यवस्थापन अपरिहार्य छ । स्वार्थको व्यवस्थापन एकीकृत कानुनबाट मात्र सम्भव छ । त्यस्तो कानुन बनाउन राजनीतिक इच्छाशक्ति कम भएको सन्दर्भमा सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज, विकास साझेदार र गैरसरकारी संस्थाहरूले सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई निरन्तर दबाब दिन आवश्यक छ ।
-चापागाईंले नेपालको संसदीय मामिलामा स्वार्थको द्वन्द्व विषयमा अनुसन्धान गरेका छन् ।
प्रकाशित : माघ १३, २०७८ ०८:४४
माघ १३, २०७८ जीवन बानियाँ
प्रकाशित : माघ १३, २०७८ ०८:४०